दुर्गेश थापा के हो यो ख्यास्स पुतली भनेको ? चेलीबेटिले तीज मनाउन पाएनन भनेर किन खुशी भाको दुर्गेश ? (भिडियो सहित) – Classic Khabar
August 5, 2021 198
पछिल्लो समय बि,बादमा सबै भन्दा बढि तानिने गायकका रुपमा दुर्गेश थापा देखिएका छन् । उनले ल्याएको गितले सधै सामाजिक सञ्जालमा त,हल्का नै पि,ट्ने,गरेको छ । बिशेष गरेर गाउँघरमा बोली चालीका रुपमा प्रयोग हुने द्धि,अर्थी लवजहरु गितमा मिसाएर ल्याउन मा,हिर छन् गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा ।
तिज छोरीको मात्र हो भन्ने अर्थ दिने गितहरुलाई च्या,लेन्ज गर्दै उनले पहिलो पटक ल्याएको हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा गितले उनलाई सबै माझ चिनायो । त्यसै लयलाई पक्रि,एर उनी अहिले गितको सिक्वेल ४ सम्म आईपुग्दा हरेक चोटी बिबा,दमा तानिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय उनी नयाँ गीत ‘बीच्च बीच्चमा ४ मा प्रयोग गरिएको ख्या,स्स पुतली’ शब्दका कारण उनी विवा,दमा तानिएका छन् । उनको गीतमा प्रयोग भएको यो शब्द हटाउ,नका लागि उनलाई लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले चेता,वनी पत्रसमेत पठाएको थियो । तर उनले प्रतिष्ठानको चेता,वनीलाई बेवा,स्ता गरेर गीत रिलिज गरेका । दुर्गेशको यही बिषयमा रहेर पुन्य गौतमले आफ्नो बिचार राखेका छन हेरौ उनले के भने
Prevदाम्लोले बाँधेर जनता कुट्ने वडाध्यक्ष पक्राउ, के हुन्छ कारबाही ?
Nextहिमानी थाइल्यान्ड बसेको मौकामा निर्मल निवास छिरे पारस शाह
पूजा आकाशको बिहे होस् भन्नेलाई दिए यस्तो भावुक सन्देश : ब्रेकअप हल्लाले फ्यान डिप्रेसनमा गएको खबरले झर्यो पुजा आकाशको आँशु (भिडियो हेर्नुस्)